Torohevitra avy amin'ny Semalt amin'ny fomba hanakanana ny lahatsoratra, ny mailaka tsy ilaina, ary ny antso an-tariby
Nilaza i Max Bell, Semalt mpanara-maso ny Customer Success, fa mety hanimba haingana ny takarivanao haingana be ny lahatsoratra an-tsokosoko, ny mailaka tsy fantatra, ary ny fiantsoana fivarotana. Tamin'ny taona lasa, nanangona lahatsoratra maherin'ny 114.000 tsy misy fangatahana sy antso manelingelina ny Kaomisiona momba ny Fampahalalam-baovao. Ny isa kosa dia andrasana ho lasa an-tapitrisany noho ny fisondrotry ny spammers amin'ny Internet. Ny fanandramana hamafana ireo hafatra an-tsoratra sy ny mailaka an-junk avy ao amin'ny kaontinao dia tsy hoe fotoana mandany fotsiny ihany fa sarotra ihany koa.
Ahoana no hanakanana lahatsoratra tsy ilaina
Naharay baomba mamely avy amin'ny spam ve ianao? Tsy misy toerana ahiahy! Raha nahazo ny lahatsoratra avy amin'ireo mpanafika ianao, toy ny fiantohana ny fiantohana ny fiantohana (PPI), dia tokony handinika ny filazanao ny raharaha amin'ny mpandraharaha ao amin'ny tambazotra ianao mba hahazoana torolàlana fanampiny. Maro amin'ireo mpanome tolotra aterineto no manolotra tolotra maimaimpoana maimaim-poana hisakanana ny mpitsoa-ponenana amin'ny fampijaliana azy ireo. Mba hampahafantarana ireo lahatsoratra ratsy, dia alefaso amin'ny 7726 ny andinin-tsoratra tsy ilaina ary ampidiro ny isan'ny mpandefa. Ny tambajotra goavana dia teo am-piandohana mba hiarovana ny mpanjifa tsy ho voahelingelin'ny spammers sy hackers. Ny politika sy ny fitsipika dia mifehy ny fomba fiasan'ny orinasa mpanome tolotra sy orinasa. Amin'ny maha-mpampiasa finday anao dia afaka manapa-kevitra ny hanao tatitra na hananganana fitarainana any amin'ny Biraom-panjakana. Ny orinasa izay nandrava ny fepetran'ny fifanarahana dia mandoa lamandy mihoatra ny £ 500,000. Vao haingana, ny orinasan'ny orinasa iray izay miasa ao Bradford dia niafara tamin'ny fandaniana vola be ho an'ny £ 80,000 taorian'ny nandefasana lahatsoratra an-tapitrisany an-tapitrisany nandritra ireo enim-bolana farany.
Ahoana no hanakanana ireo antso an-telefaona an-katezerana?
Ny tolotra tolotra an-telefaona (TPS) dia nanampy be loatra an'ireo mpampiasa finday izay nahatonga ny antso amin'ny varotra an-tsokosoko avy amin'ny mpitsoa-ponenana. Mba hampitsaharana ireo antso avy amin'ny mpivarotra sy ny varotra ara-barotra, dia soraty amin'ny nomeraon-telefaona ny nomeraon'ny findainao. Ny orinasa dia tsy nahazo alalana hiantso anao intsony rehefa misoratra anarana amin'ny fikambanana TPS ianao. Mba hisoratra anarana amin'io serivisy io dia alefaso "TPS" miaraka amin'ny adiresy imailakao amin'ny 85095 ianao. Afaka minitra vitsy dia hahazo mari-pahaizana amin'ny alàlan'ny Telefaonina ianao, izay manamafy fa nampidirina tao amin'ny daty. Misy orinasan-tserasera sasantsasany ihany koa manolotra tolotra ho fanampiana ny fanakanana ireo antso an-telefaona Na izany aza, dia mety tsy mitovy ny fiampangana miankina amin'ny fametrahana ny vokatra fanakanana antso.
Ahoana no hanakanana ny mailaka amin'ny spam?
Mety haharikoriko ny mailaky ny mailaka tsy fantatra amin'ny alàlan'ny spam. Mihamitombo ny fiakaran'ny aterineto ao amin'ny aterineto rehefa mandeha ny fotoana. Mampiasa mailaka imbetsaka ny spam mba hijery ireo angon-drakitra farany. Amin'ny maha-mpampiasa finday finday, misoroka amin'ny fisintonana sy famoahana ny mailaka avy amin'ny sehatra tsy misongadina. Ny Spammer dia mahazo fampandrenesana rehefa manokatra rohy nalefa any amin'ny kaontinao mailaka. Ampiasao ny bokotra 'tsy misoratra anarana' hanakanana ny mailaka tsy fantatrao mba tsy hiditra ao anaty mailakao. Raha nahazo alalana mailaka avy amin'ny adiresy mailaka manokana ianao, ny fanakanana ny adiresy mailaka no fitifirana tsara indrindra ho anao. Ny fakana ny adiresy dia miantoka ny mailaka misokatra avy amin'ny adiresy mailaka voasakana mankany amin'ny lahatahiry spam.
Ny fametrahana ny programa fanodinana ny viriorninao dia tena manan-danja indrindra raha ny mikasika ny fiarovana ny findainao. Aza avela hiantso ireo takela-pifamoivoizana, ireo andinin-teny diso, ary ny mailaka tsy ilaina. Ampiasao ireo fehezanteny sy toro-hevitra nasongadina etsy ambony Source .